Obosara Oru: 2600mm
Herụ Ọrụ Elu: 1200mm
Arụ ọrụ ikike: 720m³ / awa
Kedu ihe ntụgharị compost?
Compost Turner, makwaara dị ka compost Ndinam igwe, windrow agwakọta igwe, organic fatịlaịza Ndinam igwe, compost igwekota, wdg Ọ na-eji na-atụgharị, bido, mix, ezumike na oxygenate nile di iche iche nke organic anụ ụlọ n'efu si ugbo dị ka atụrụ nri, ịnyịnya nri, nri ehi, ọgazị nri, ọkụkọ nsị, kamel nri ...
Esi mee organic fatịlaịza site TAGRM’s compost ntụgharị?
1. Gbanwee ọdịnaya compost, meziwanye ihe ndị dị gburugburu 50%. Emekarị obodo mkpofu kwesịrị itinye nri anụ ụlọ, ahịhịa ọka kwesịrị ịgbakwunye nri anụ ụlọ, sludge nke ọchịchị kwesịrị ịgbakwunye ntụ osisi, wdg.
2. Na-achikota akuku ihe akpokpo n’oghere nke kwesiri ekwesi maka igwe akuku aru.
3. Jiri igwe na-atụgharị compost iji tụgharịa, gwakọta, azọpịa na ikuku oxygenate ihe na-eme ka ị na-emechi emechi oge niile. Ngwunye ihe eji akwadebe nwere ike itinye mmiri ma ọ bụ gbaa ụka.
4. Nyochaa ọnọdụ gbaa ụka. Mgbe okpomọkụ nke compost siri ike ma yie ọnọdụ nke gburugburu ebe obibi, isi nke compost dị ka ụrọ, agba nke compost dị nso na agba ojii, usoro compost rụrụ arụ, C / N <0.6, gbaa ụka agwụla.
.Dị M2600 Idozi ala 130mm
Ike ọnụego 68KW Nrụgide nke ala 0.46Kg / cm2
Ọnụego ọsọ 2200r / nkeji Obosara na-arụ ọrụ 2600mm Max.
Oriri mmanụ <235g / KW-h Ọrụ dị elu 1200mm Max.
Batrị 24V 2x12V Ikpo udi Triangle 45 Celsius
ike mmanụ 40L Gaanụ ọsọ L: 0-8m / nkeji H: 0-24m / nkeji
Sochie usoro 2830mm W2 N'azụ ọsọ L: 0-8m / nkeji H: 0-24m / nkeji
Nri n'ọdụ ụgbọ mmiri obosara 2600mm W3 Na-atụgharị okirikiri 1875mm Nkeji
Ojuju 3400x2330x2850mm WlxLlxHl Drivegbọala ọnọdụ Hydraulic
Ibu ibu 2600kg Enweghị mmanụ Ike ịrụ ọrụ 720m3/ h Max.
Dayameta nke ala 497mm Jiri mma
M2600 compost igwe na-anwale ihe nkiri ihe nkiri na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. M2600 compost na-atụgharị igwe na-agwakọta akwukwo nri.
Nke gara aga: Cheap compost inggwakọta igwe n'ihi na anụ ụlọ ịnyịnya nri compost Turner
Osote: TAGRM compost windrow Turner maka anụ ụlọ enyí nsị na zoo